Japanese obodo ọnwụnwa blockchain dabeere online ịtụ vootu
A Japanese obodo ọchịchị na-otu n'ime ndị mbụ na mba na-anwale a blockchain dabeere na usoro na-ahapụ bi igba votes ikpebi na obodo mmepe mmemme. The ọchịchị nke Tsukuba, a obodo mara maka ya ọrụ na nkà mmụta sayensị na mmepe kemgbe 1960, dechara blockchain ule na Aug. 28 na 119 votes chikọta.
Akuko a siri na usoro integrates ihe njirimara nkwenye igwe na a decentralized netwọk. Mgbe etinye ihe ID kaadị na igwe n'ihi nkwenye, Ntuli wee họrọ ha họọrọ mmemme. The usoro n'ihu ezoro ezo ma echekwara na data nke ha ballots site na tamper na-àmà na-ekesa na netwọk. Ọ bụrụ na ngwa na-egosi nke ọma mgbe n'ihu review, mpaghara ọchịchị na-atụ anya iji mụbaa ozi bi ugwu ugwu ebe, n'agwaetiti ndị dịpụrụ adịpụ na mba ọzọ.
Kraken Daily Market Report maka 02.09.2018
$134,736 Ada aba
$86M ahịa gafee ahịa niile taa
Hey Altcoin Daily Team!! Ee ...
Tradingview Mgbakwunye Link: ht...
Previous Post:Blockchain News 01.09.2018
Will Bitcoin Continue to Surge? FB’s Coin will Boost BTC Price, Unstoppable Domains – kaadị News